TAOZAVATRA : Nanao fanofanana tenona nandritra ny 10 andro ny ao amin’ny Angaya
Ny Gescod no namaly ny antson’ny mpanao taozavatra mivondrona ao amin’ny kaoperativa Angaya. 17 décembre 2019
Nividianana “métier à tisser” ny kaoperativa Angaya ho tan-tsoroka amin’ny fampiroboroboana ny asan’izy ireo. Tsy nijanona teo ny Gescod ka naka sy niantoka mpampiofana manokana andriamatoa Claude, avy any Alarobia Ambatomanga hanome ny fanofanana ho an’ireo mpikambana ao amin’ny kaoperativa Angaya ireo. Rafia, penjy, satrana, hasy, kofehy, fahandamba… dia azo tenomina avokoa. Miisa fito ireo nanaraka ny fanofanana ka tao amin’ny tranoben’ny kolontsaina no nanaovana izany. Nahita ny fahaiza-manao nandritra ny fampirantiana tany Antananarivo izy ireo, ka nangataka ny homena fanofanana…
Betsaka ny zavatra azo atao, “set de table”, “chemin de table”, harona, lamba sy ny maro hafa… Azo trandrahana ihany koa ka ampiasana akora hafa, toy ny jirofo, lavanila, azo ampiasaina hatramin’ny kely indrindra ny akora ka mihena ny akora lany.
Mandritra ny 30 andro ny fanofanana fa nozaraina telo ka ny andiany voalohany ity natao tamin’ny volana desambra ity. Ny faharoa kosa hatao amin’ny volana avrily ary ny farany hatao ny volana jona. Manentana hatrany ireo namany koa i Josiane filohan’ny kaoperativa Angaya mba ho tonga hanatrika ny fanofanana. Efa nahazo ny fahaizana mampiasa ilay fitaovana sy ny karazana akora azo ampiasaina aloha ireo andiany voalohany ireo fa ny fanatsarana azy sy ny fampisehoana ny fahaizan’ny tsirairay sisa.